Kuuya kwedenda kwakaita kuti isu tese tizive zvakanyanya kuti hutano hupfumi hukuru. Panyaya yekuchengetedza mhepo nharaunda, kuwanda kwebhakitiriya nemavhairasi, kurwiswa kwedutu madutu, uye yakawandisa formaldehyde mudzimba nyowani zvinoitawo shamwari dzakawanda uye nyowani kutarisisa mweya ...
Vadiwa Vatengi: Tinodada kuzivisa kuti nekuda kwekukura kwedu kunoshamisa mu2020, hofisi yedu yeShenzhen yakatamira kunzvimbo nyowani muna Kubvumbi. Nzvimbo nyowani iri pa33 / F, Kuvaka 11, Tiananyungu Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. Tinotarisa ku ...
Kunetsekana pamusoro pe COVID-19, vanhu vazhinji vari kunetsekana nezve zvemukati memhepo mhando uye kuti yekunatsa mweya inogona kubatsira. Consumer Reports 'nyanzvi dzinoburitsa zvinogona kugadziriswa nemweya wekugara kana zvasvika pakuchenesa mweya. Kune matatu akakosha marudzi eanosuka mhepo anga ari markete ...
Nekupararira kwe COVID-19, chave chibvumirano chekupfeka masiki kana uchienda kunze. Naizvozvo, munzvimbo yemukati umo vanhu vanoungana muzvivakwa zvemahofisi, nzvimbo dzekutengesera hombe, mahotera, maresitorendi, nezvimwewo, nyanzvi dzinoratidza kuti kuvhura windows emhepo yekufefetedza ndiyo nzira ine hupfumi. ...
Chivabvu 7th-Chivabvu 8th 2021 Yambuka muganho E-commerce Summit & Sourcing Fair yakaitirwa muHoro 8 yeSenzhen Futian International Convention uye Exhibition Center. Pasi pakanga pakazara. Nedingindira rekuti "nyika idiki, bhizinesi iri hombe", rakakwezva kupfuura 300+ Ali mu ...
Anobatsira Matipi ekuzvidzivirira Iwe nevamwe kune COVID-19
1.Pfeka chifukidzo chinofukidza mhino nemuromo wako kuti ubatsire kuzvidzivirira pamwe nevamwe. 2.Gara 6 tsoka wakaparadzana nevamwe vasingagare newe. 3. Tora mushonga we COVID-19 kana uchinge wawanika kwauri. 4.Avoid mapoka uye isina mweya mhepo indoor nzvimbo. 5.Shambidza maoko ako kazhinji nesipo nemvura. Shandisa ha ...
tinogona kushandisa masiki uye mweya unonatsa pamwechete panguva yedenda
Munguva pfupi yapfuura, kunze kweChina, denda repasi rose idzva rekorona rakatanga kuve rakaomarara zvekare, rakatonyanya kupfuura muna 2020. Naizvozvo, zvichiri kudikanwa kupfeka mask kunze, uye zvinodikanwa kubatidza chinonatsa mweya ku kumba. Kunyangwe vanochenesa mweya vasingakwanise kusefa zvinobatika ...
Tose tinoziva kuti vanhu pasi rese vari kuzobayiwa majekiseni ekudzivirira COVID 19. Izvi zvinoreva here kuti takachengeteka zvakakwana mune ramangwana? Chaizvoizvo, hapana munhu anogona kuve nechokwadi chekuti patinogona kushanda nekubuda takasununguka. Isu tichiri kuona pane yakaoma nguva pamberi pedu uye tinofanirwa kucherechedza kuchengetedza ...
Inogona here kuchenesa mweya kunatsa iyo Covid-19?
Mushure mekunge utsi hwasiya chiratidzo chevanhu, vanhu vazhinji vakanyatso bata mafungiro ekuchenesa mweya, Vakafunga kuti pakanga pasisina chikonzero chekutenga vanonatsa mweya. Ivo havana kunzwa chero kusagadzikana kana vachifema kunze mazuva ese, asi kuuya kweCovid-19 kwakaita kuti vanhu vafunge zvakare, Kune dem ...
Tikugashirei Kuti Shanyira Yedu 2021 Nyowani Kusvika Mhepo Vanonatsa Mhenyu Ratidza
Tikugashirei Kuti Tishanyire Yedu 2021 Yakakwira Mhando Yekunatsa Mhepo Inonatsa Kurudziro Rarama Ratidza
Shenzhen Guanglei Electronic Co, Ltd. iri kuita iratidziro yekurarama paMade-in-China.com. Joinha isu ikozvino! Musoro: 2021 Yakakwira Mhando Yemhepo Inochenesa Kurudziro Yekutanga Nguva: 2021-03-03 16:00 PM UTC + 08: 00 Dzvanya inotevera URL kuti upinde mhenyu yekuratidzira imba zvakananga: https://live.made-in-china.com/ imba-dmJnEcxWWQ ...
Tinogamuchirwa Kushanyira Yedu 2021 Inotengesa Inotengesa Inonatsa Mhepo Inonatsa uye Ozone jenareta Rarama Ratidza
Shenzhen Guanglei Electronic Co, Ltd. iri kuita iratidziro yekurarama paMade-in-China.com. Joinha isu ikozvino! Musoro: 2021 Kupisa Kutengesa Inonatsa Mhepo Inonatsa uye Ozone jenareta Kutanga Nguva: 2021-03-02 20:00 PM UTC + 08: 00 Dzvanya inotevera URL kuti upinde mhenyu yekuratidza kamuri zvakananga: https: //live.made-in-china. com / imba-yeNxEQ ...
123456Next> >> Peji 1/6
UV Home Air Purifier , Best Home Air Purifier Uk , Kumba Mhepo Kunatsa, Ozone Air Purifier Home dhepoti , Sezvingatarisirwa Neutralizes Home Air Purifier , Air Cleaner Home Air Purifier, All Products